भक्तपुरका वडाध्यक्षको बयान, ‘जीन्दगी नै मदनकृष्ण र हरिवंशको वडाध्यक्ष टेलिफिल्म जस्तो !’ (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
भक्तपुरका वडाध्यक्षको बयान, ‘जीन्दगी नै मदनकृष्ण र हरिवंशको वडाध्यक्ष टेलिफिल्म जस्तो !’ (भिडियोसहित)
एउटा वडा अध्यक्षको एक बर्ष ?
उनी भक्तपुर जिल्लाको सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष किरण थापा मगर । अहिले उनको दैनिकी निक्कै व्यस्त छ । २०७४ साल बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनबाट सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएदेखिको एक बर्ष कसरी बित्यो अहिले उनले पत्तो पाउन छाडेका छन् । विहानदेखि बेलुकीसम्म जनताको काममा लागेका थापा मगरको यो वडा सूर्य विनायक नगरपालिकामा मात्रै होइन देशकै लागि उदारणीय बनेको छ ।
२४.३२ वर्ग कि.मी.को क्षेत्रफलमा फैलिएको सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर आठ सबैभन्दा अविकसित मध्ये एक हो । साविकको सिपाडोल गा.वि.स अहिले सूर्य विनायक नगर पालिकाको वडा नम्बर ८ भएको छ । राजधानीबाट नजिकै रहेर पनि निक्कै दुर्गम मानिएको यो वडाले जनप्रतिनिधी पाएपछि लोभलाग्दो प्रगती गरेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले रुचाएर, संभावना देखेर विजयी गराएका थापा मगरले अहिले जनताको मनोभावना अनुरुप काम गरिरहेका छन् । जसको कामलाई स्थानीयहरु जनसमुदायले निकै सहयोग पाएर उनी अगाडि बढिरहेका छन् ।
बाटो विस्तारले दुर्गम वस्ती सुगममा परिणत हुँदै
साविकको सिपाडोल गाविस १ बर्ष अघि दुर्गम गाविसको रुपमा परिचित थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि किरण थापा मगर वडा अध्यको रुपमा आए । त्यसपछिको १ बर्षमा यो गाउँले विकासको कोल्टे फेर्दैछ । भक्तपुर सूर्यविनायक सडक खण्ड समेत पर्ने यो वडामा अहिले वाटो विस्तारको काम धमाधम अगाडि बढेको छ । जनप्रतिनिधीमा निर्वाचित भएलगतै थापाले सूर्य विनायकबाट काभ्रे जाने बाटोको विस्तार शुरु गरेका थिए । सूर्यविनायकदेखि काठमाडौं सडक खण्ड निक्कै ठूलो र फराकिलो भएपनि त्यसको काभ्रे पट्टिको खण्ड भने निक्कै साघुरो थियो र अहिले यो वाटो विस्तारको काम अगाडि बढिरहेको छ ।
यो वाहेक पनि काभ्रेपल्चोकसँग सीमा जोडिएको यो वडाको सुविधा लिन पनि नागरिकहरु २ घण्टासम्म हिडेर आउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि आशापुरीदेखि पार्टीभञ्ज्याङ, भ्याम्पेडाँडा हुँदै सुर्यविनायकसम्मको दुरी मोटरबाटोबाट छोटिएको छ भने नयाँ ७ किलोमिटरको बाटोको काम अगाडि बढेको छ । २ घण्टा हिडेर वडा कार्यालय धाउने स्थानीयबासीहरुलाई सजिलो हुँदै गएको छ । पार्टिभञ्ज्याङदेखि घ्याम्पेडाँडासम्म स्थानीयले नै बाटो खनेका छन र यसको नेतृत्व पनि वडाध्यक्ष थापाले नै गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै यही वडामा रहेको ऐतिहासिक गढिसम्म जाने बाटो खोलिएको छ भने वडा कार्यालयबाट दोर्लाङसम्म जाने डेढ किलोमिटको बाटो पनि बनेको छ । त्यसैगरी डोरिडारको सहयोगमा ११ करोड ५७ लाखको ठेक्कामा ८ मिटर चौडा भएको बाटो पलाँसेदेखि डोलेश्वरसम्म पुगेको छ र, यसले स्थानीयहरुलाई उत्साहित बनाएको छ । अन्य ठाउँमा पनि वाटो विस्तारको काम उत्तिकै दूत गतिमा भइरहेको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि जनप्रतिनिधीको अग्रसरता
सहरीकरण तर्फ तीव्र गतिले अगाडि बढेको यो वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था सुधार गर्न जनप्रनिधिहरुले काम गरिरहेका छन् । जनताबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिले सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी लिने कामको शुरुवात पनि यही बडा कार्यालयबाट भएको हो । जस्ले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि निक्कै ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
भूकम्पपछि जोखिमयुक्त बनेको र सडक छेवैमा रहेको शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालयलाई जनप्रतिनिधीहरुको अग्रसरतामा सरकारी जमिनमा शान्त वातावरणमा सार्ने काम भइरहेको छ । अहिले वडा कार्यालयले नै सांढे ४ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गरेर १ करोड १० लाखको लगानीमा ८ कोठे पक्की भवन बनिरहेको छ भने शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ ।
त्यस्तै अन्य प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयको पुर्वाधार विकासको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।
खानेपानी र सरसफाईसँगै समृद्ध वडाको लक्ष्य
वडामा खानेपानीको अभावलाई पुरा गर्न सिपाडोल खानेपानी तथा सरसफाई समितिलाई ४३ लाख रुपैयाँ, त्यस्तै सिपाडोल बुहत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिलाई ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरि काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । खानेपानी ट्यांकी बनाउने काम र पाइपलाईन विछ्याउने काम पनि भइरहेको भने सरसफाईमा पनि विशेष ध्यान दिएर वडा कार्यालय अगाडि बढेको छ । समृद्ध वडा बनाउँने लक्ष्यका साथ वडाध्यक्ष थापा मगर खटिएको बताउँछन् ।
धार्मिक र पर्यटनलाई सँगसँगै अघि बढाइदै
नगरपालिकाबाट २ कि.मी. दक्षिण साविक सिपाडोल गा.वि.स मा पर्ने सुर्यविनायक क्षेत्र धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट अति महत्वपुर्ण छ । यहाँको प्रसिद्ध सुर्य विनायक गणेश मन्दिर लिच्छिवि कालमा शिखरशैलीमा निर्माण भएको पाईन्छ । त्यस्तै डोलेश्वर महादेव र आशापुरेश्वर पनि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलको रुपमा परिचित छ । यी क्षेत्रहरुको विकास र प्रचार गरि वडालाई धार्मिक तीर्थस्थलका रुपमा विकास गरिने लक्ष्यका साथ वडा अगाडि बढेको छ ।
टेलिफिल्मकै जस्तो वडा अध्यक्षको व्यस्त दैनिकी
जनप्रतिनिधिको रुपमा वडा नम्बर ८ को विकासको जिम्मेवारी संहालेका किरण थापा मगरको दैनिकी ब्यस्त छ । उनी सबैभन्दा बढि आफ्नो वडाको विकास र सुधारमा लागि परेका छन् । उनी विहान उठेदेखि नै शुरु हुने उनको दिनचार्य वडाको दैनिक प्रशासनदेखि विकासका कामहरुको निरिक्षण, अनुगमन, त्यसैगरी जनताको गुनासो र सुझावका लागि हिडिरहन्छन् ।
यो वडामा अहिले जे जति कामहरु भइरहेका छन् त्यो केवल वडा अध्यक्ष थापाको पहलले मात्र भएको होइन । उनलाई स्थानीय बासीन्दा र अन्य प्रतिनिधिहरुको पनि सहयोग उस्तै छ । हरेक विकासका काममा २० देखि २५ प्रतिसत काम जनसहभागीतामा भएको छ भने स्थानीय निकायको बजेटमा मात्र भर नपरी स्थानीयहरुको सहयोग पनि जुटेको छ ।
स्थानीयहरुकै सहयोगमा बाटो खन्नेदेखि बाटो चौडा बनाउने, ग्राबेल गर्ने जस्ता कामहरु भएको छ । समग्रमा एउटा नमूना गाउँ बनेको छ सूर्यविनायक नगरपालिका ८ अर्थात साविकको सिपाडोल गाउँ । स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले दुर्गम गाउँको मुहार फेरिएको छ र नगरपालिका मध्येकै उत्कृष्ट वडा भएको मेयर वासुदेव थापा बताउँछन् ।
वडाध्यक्ष थापामगर र उनको समूहले जसरी काम गरेको छ यो सूर्यविनायक नगरपालिकाका लागि मात्रै होइन देशकै लागि उदाहारणीय काम हो ।
देशका वडाध्यक्षहरुले गर्नुपर्ने काम ?
देश संघीयतामा गएसंगै सिंहदरवारभित्र सिमित रहेको अधिकार अहिलले स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । लामो समय कर्मचारीका भरमा चलेका गाविस र वडाहरु गाउँपालिका र नगरपािलकामा परिणत भएका छन र जनताको आफ्नै प्रतिनिधि आएका छन । यसभन्दा अगाडी जनताको गुनासो सुनुवाई हुनै निकाय नै थिएन । तर अब जनप्रतिनिधिमार्फत उनीहरुले आफ्नो गुनासो र आवश्यकता सुनुवाई हुने ठाउँ पाएका छन ।
देशभर जम्मा ७५३ स्थानीय तहहरु छन । जसमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरु छन । देशको सबैभन्दा सानो इकाई नै वडा भएकाले देश विकासको पहिलो खुड्कीलो नै वडा हो । संघीय व्यवस्था अनुसार ६ हजार ७ सय ४३ जना वडाअध्यक्ष स्थानीय तहमा छन । उनीहरु स्थानीय सरकारका मन्त्री जस्तै हुन ।
जसरी केन्द्रिय सरकारमा नीति नियम बनाउन मन्त्रीहरुको अहम् भुमिका त्यसैगरी स्थानीय सरकारमा पनि वडाध्यक्षको त्यती नै भुमिका हुन्छ । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडाध्यक्षहरु स्वतः सदस्य हुन्छन । हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो कार्यप्रक्रिया र कार्यबिभाजन नियमावली बनाउनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार वडा अध्यक्षहरुलाई जिम्मेवारी तोकिने गरिन्छ । र सोही अनुसार वडाध्यक्षहरुले काम गर्ने गर्दछन ।
नगरपलिका वा गाउँपालिकाका हरेक वडालाई सेवाकेन्द्रको रुपमा रखिएको छ । आफ्नो वडाको सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी सोही वडाका वडाध्यक्षलाई हुन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नीती तथा कानून बनाउने कार्यमा पनि वडाध्यक्षको अहम् भुमिका हुन्छ । प्रस्ताव गरिएका नीति तथा योजनालाई वडाध्यक्षहरुले नै पास गराउने गर्दछन । वडाको आर्थिक विकासमा अडाध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार नभएपनि वडाको विकासमा भने वडाध्यक्षको मुख्य भुमिका हुन्छ ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको पनि १ वर्ष पुरा भईरसकेको छ । यो बिचमा जनताले जनप्रतिनिधि नहुँदा भन्दा धेरै राहत महसुस गरेका छन । कुनै ठाउँका जनप्रतिनिधि काम गर्न गतिलो कानुन नभएको भन्दै राज्यलाई दोष दिदै बसिरहेका छन भने कोही जनप्रनिधिहरुले यहि कानुनी व्यवस्थामा पनि आफ्नो वडाको भरपुर विकास गरिरहेका छन । यसका गतिलो उदाहरण हुन सूर्यविनायक नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष किरण थापा मगर भएका छन् । जसले एक वर्षको अवधिमा नै आफ्नो वडालाई नगरपालिकाको अन्य वडाको तुलनामा विकासमा पहिलो नम्बरमा ल्याउन सफल भएका छन ।
अहिले देशमा तीन तह छन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय । जसमध्ये सबभन्दा सानो तह हो स्थानीय तह । र यसको पनि सबैभन्दा सानो इकाई हो वडा । त्यसैले देशको विकास पनि सबैभन्दा सानो ईकाई बाट नै सुरु हुन्छ । देशका सबैभन्दा सानो इकाई जहाँबाट विकास सुरु हुन्छ यसको नेतृत्व लिएका हुन्छन वडाध्यक्षले । जसका कारण यसलाई कसरी अगाडी बढाउने र कसरी विकास गर्ने भन्ने जिम्मेवारी पनि वडाध्यक्षलाई नै हुन्छ ।
एक वडाध्यक्षले एउटा वडाको जिम्मेवारी लिएपनि ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्षले पूरा देशको नै विकासको जिम्मेवारी लिएका छन । तर दुर्गमका अझै पनि कतिपय गाउँपालिकाका वडाहरुमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । त्यसैले वडालाई सशक्त बनाउँने हो भने मात्रै अव विकास सभ्भव छ र यसैलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी भइसकेको छ ।